Brass Israeli Army Bullet Pendant neGolani Oak Tree Insignia
Jewellery kubva kuIsraeri
Ndapota cherechedzai: iyo mhete yenguruve inogona kumira mumari uye haizoendeswi kunzvimbo yayo. Isiraeri-yakashama mabhuku haisi mhosva uye haadzoki uye haibhadhari kubhadhara kana icho chibvumirano chikarambidzwa uye chisina kuendeswa.
Takafarira chaizvo iyi Golan yokuputika pfuti yemapurisa kwenguva yakawanda zvokuti tinoiunza kwauri! Oki ndiyo chiratidzo chepamutemo cheGolani brigade. Kufanana nemarandi edu ose eBallistic, iyi ndeimwe yemapurisa chaiwo. Izvo zvipembenene, chokwadi, zvinodurura pfupfu yakanyatsoputika. Iri rakanyanyisa rinotyisa raIsrael rinopemberera chinyorwa chinonyanya kuzivikanwa nevana vechiIsrael Forces. Ichi ndicho chinotonhora zvikuru! Aya mavara emhando ndeyechokwadi zvezvinhu zveIsrael. Pendants, sezvavakange vachida zviyeuchidzo zveIsrael zvevashanyi kwemakore mazhinji. Izvi zvakakurumbira zvipo zvinhu zvinosanganisira bhandi yemhangura.
Israeli Army Bullet Pendant Yakarongedzwa neDFF Insignia
Israel Air Force, Nyeredzi yaDavid Necklace
Israel Army Dog Tag ne Hamsa
Runako hweRoma, Sirivha Yakagadzirwa neRoma Gurusa Pendant
Heino bhuku rekurindira uye zvinhu kubva kuzvitoro muEurope, USA, Singapore neHong Kong
Kutengesa zvigadzirwa kuRussia chete nokuda kwebasa rako pachako uye nemari inopfuura kudarika 7500 euro.
Iwe unotenga chete munzvimbo dzepamutemo pasi pose.
Catalogue yemarinda uye zvigadzirwa kubva kunyika dzakasiyana-siyana yenyika nekutarisa muRussia neCIS.
Kutenga zvinhu kubva kumativi ose enyika kuburikidza nekambani muHong Kong
© 2011-2019. Delivery maawa kubva pose: Germany, Switzerland, Hong Kong, Singapore, Italy, United States + 7-966-158-75-08